Taratasim-pifandraisan’ny mpandika: ireo fitaovana CAT, ny fandikanteny Skype eo noho eo, ary zavatra maro hafa! · Global Voices teny Malagasy
Ankoatra ny CAT&TM, resahana ato ny QUARTZ sy Translators Family
Voadika ny 14 Jona 2019 7:17 GMT
Tsy ela akory izay, tanaty lahatsoratra iray tao amin'ny “Talking Humanities” noresahan'i Dr. James Hadley, mpikaroka momba ny fandikànteny sy fifampidinkidiran'ny teny samihafa ny momba ny “fomba fampitohizan'ny fandikanteny ireo zavatra ataontsika ato anatin'ny taonjato faha-21″. Ahoana no hisehoan'ny maripamantarana manokana ny mpandika ao anatin'ny asa nantaony? Ahoana no ahitàna taratra ny fironana politika, ara-pinoana sy ideolojikan'ny mpandika ao anatin'ny asa fandikàna nataony? Ireny rehetra ireny no fanontaniana ezahany valiana. Vakio misimisy kokoa ato ny momba ny drafitra arahany !
Raha zazavao ao anatin'ny indostrian'ny fandikàna ianao, mety efa nandre olona niresaka ny fampiasàna ireo fitaovana CAT sy ny TMs. Tsia, bibikely voloina izy ireny. Fa ny hoe fitaovana CAT dia fanafohezana ny “Computer Assisted Translation” ary ny TM dia “Translation Memory”. Amin'izao fotoana izao i Emma Goldsmith, mpandika ireo teny fampiasa amin'ny sehatry ny fitsaboana, miainga avy amin'ny teny Espaniôla ho amin'ny teny Anglisy, dia namoaka boky elmktronika iray azo alaina maimaimpoana (!) mitondra lohateny hoe “Fampidirana ho amin'ny Translation Memory” mba hahafahan'ny olona tsirairay eto mianatra bebe kokoa momba ny fampiatiana ireny fitaovana ireny ho ao anatin'ny asa velontenany. Fantaro misimisy kokoa ato!
Aza atao ny manomboka tetikasa iray ka hijanona amin'ny fieritreretana hoe, “inona no tian'ity olona ity ho azo?!” Aza manahy intsony! Natambatry ny fianakaviamben'ireo mpandika (Translators Family) ho anaty lisitra iray ireo fanontaniana izay mety ho apetrakao amin'ny mpanjifa alohan'ny hanombohana asa iray mba hanampiana fanazavàna momba ireo olana mahazatra sy hametrahana ny olona rehetra ho anaty pejy iray ihany momba izay tetikasa ho atao. Topazo maso ato!
Ny fanambaràna farany tao amin'ny Skype dia manasongadina “fitaovana iray fandikàna afaka mandika mivantana ny teny eo noho eo, ho aminà tenimpirenena maromaro.” Amin'izao fotoana aloha dia mbola amin'ny endrika savaravina amin'ny Anglisy, Frantsay, Alemàna, Italiàna, Espaniôla ary Mandarin no azo raisina aminy. Saingy ny fanontaniana ao an-tsain'ny tsirairay dia ny hoe, tena mety tokoa ve ilay izy? Nanandrana azy ireo olona tsara avy ao amin'ny Quartz ! Potsiro eto hijerenao izay nitranga!